သခြောပေါကျစားကောငျးစမေညျ့ အုနျးထမငျးခကျြနညျး - Latest Myanmar News
July 19, 2021 by Latest Myanmar News
အုနျးထမငျးကို ရှမျးဆနျနဲ့ခကျြပေးထားပါတယျ.အခုခကျြတဲ့ နောငျမှနျရှမျးဆနျက အရမျးမပြော့ဘဲ စီးထှေးထှေး လေးမို့ အုနျးထမငျးတို့ ထောပတျထမငျးတို့ပဲထမငျးတို့ခကျြရငျသိပျလိုကျဖကျပါတယျ.
အမကတော့ ဒံပေါကျထမငျးတဈမြိုးပဲ ဘာစမာတီဆနျ သို့မဟုတျ ရှဘေိုပျေါဆနျးမှေးဆနျဖွငျ့ခကျြပါတယျ..အုနျးထမငျးတို့ထောပတျထမငျး ပဲထမငျးတို့က ခကျြတဲ့ဆနျအရှေးမှားရငျ ကွမျးရှရှကွီးဖွဈသှားရငျ စားရတာအရသာပကျြတတျလို့ အခုလိုအမစိတျကွိုကျ ရှမျးဆနျဖွငျ့ခကျြတာပါ.
အုနျးနို့မူနျ့ တဈထုပျ.အုနျးနို့အမူနျ့က အိမျမှာဝယျထားတာကွာပွီမို့အပိုရှိလို့ထညျ့လိုကျတာပါ.မထညျ့လညျးရပါတယျနျော
ဆား teaဇှနျး နှဈဇှနျးခှဲ ( အငနျအရသာပိုကွိုကျကပိုထညျ့ပါ)
သကွား ထမငျးစားဇှနျး နှဈဇှနျးခှဲ
ခကျြမညျဆိုပါက. ထမငျးပေါငျးအိုးထဲသို့ ဆနျဆေးပွီးထညျ့.အပျေါက ပါဝငျပစ်စညျး တှအေကုနျထညျ့ပါ.ပွီးရငျရခြေိနျကတော့ ခါတိုငျး ထမငျးခကျြရငျရထေညျ့သလိုပဲထညျ့ပါ။
မတိုငျးတတျရငျ ဆနျပျေါရလေကျတဈဆဈခှဲပိုပိုလေးတိုငျး၍ထညျ့ပါ.တဈဦးနဲ့တဈဦး ဆနျကွောမတူ၍မိမိတို့ဖာသာ ခငျြ့ခြိနျပွီးထညျ့ပါရှငျ..အခုပွောတဲ့ရခြေိနျကတော့ ရှမျးဆနျအခြိုးပါ.
အားလုံးထညြ့ပှီးရငြ အရသာသမသှားအောငဇြှနြးဖှငြ့မှပေေးပှီးအဖုံးပိတပြှီး ခါတိုငြးထမငြးခကွသြလိုပဲခလုတနြှိပထြားလိုကရြငရြပါပီ.ခလုတတြကသြှားရငပြလပကြိုခကွခြှငြးမဖှုတသြေးပဲ ၁၅မိနဈခနြ့နှပထြားပေးပါ.
အခြိနျစမှေ့ အဖုံးဖှငျ့ပွီးထမငျးကိုအပျေါအောကျခပျဖှဖှမှပေးလိုကျပါ.ဒါမှထမငျးတှကေအခဲလိုကျကပျမနဘေဲဆနျခြောငျးလေးအတိုငျးပှပှလေးဖွဈနမှောပါရှငျ..အရသာမွညျးကွညျ့လိုကျရငျ မှေးပွီးအငျမတနျစားကောငျးတဲ့မအီတဲ့အုနျးထမငျးလေးဖွဈနပေီပေါ့ရှငျ…
အုနျးထမငျးမှေးမှေးလေးရရငျ ကွကျသားဆီပွနျ သရကျသီးစိမျးသနပျ သို့မဟုတျ သရကျခဉျြသုပျဘာလာခြောငျ ကွျော ခဉျြပေါငျဟငျးခြိုတို့ဖွငျ့သုံးဆောငျပါရှငျ။​
အုန်းထမင်းကို ရှမ်းဆန်နဲ့ချက်ပေးထားပါတယ်.အခုချက်တဲ့ နောင်မွန်ရှမ်းဆန်က အရမ်းမပျော့ဘဲ စီးထွေးထွေး လေးမို့ အုန်းထမင်းတို့ ထောပတ်ထမင်းတို့ပဲထမင်းတို့ချက်ရင်သိပ်လိုက်ဖက်ပါတယ်.
အမကတော့ ဒံပေါက်ထမင်းတစ်မျိုးပဲ ဘာစမာတီဆန် သို့မဟုတ် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဆန်ဖြင့်ချက်ပါတယ်..အုန်းထမင်းတို့ထောပတ်ထမင်း ပဲထမင်းတို့က ချက်တဲ့ဆန်အရွေးမှားရင် ကြမ်းရှရှကြီးဖြစ်သွားရင် စားရတာအရသာပျက်တတ်လို့ အခုလိုအမစိတ်ကြိုက် ရှမ်းဆန်ဖြင့်ချက်တာပါ.
အုန်းနို့မူန့် တစ်ထုပ်.အုန်းနို့အမူန့်က အိမ်မှာဝယ်ထားတာကြာပြီမို့အပိုရှိလို့ထည့်လိုက်တာပါ.မထည့်လည်းရပါတယ်နော်
ဆား teaဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ ( အငန်အရသာပိုကြိုက်ကပိုထည့်ပါ)
သကြား ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ
ချက်မည်ဆိုပါက. ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ဆန်ဆေးပြီးထည့်.အပေါ်က ပါဝင်ပစ္စည်း တွေအကုန်ထည့်ပါ.ပြီးရင်ရေချိန်ကတော့ ခါတိုင်း ထမင်းချက်ရင်ရေထည့်သလိုပဲထည့်ပါ။
မတိုင်းတတ်ရင် ဆန်ပေါ်ရေလက်တစ်ဆစ်ခွဲပိုပိုလေးတိုင်း၍ထည့်ပါ.တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆန်ကြောမတူ၍မိမိတို့ဖာသာ ချင့်ချိန်ပြီးထည့်ပါရှင်..အခုပြောတဲ့ရေချိန်ကတော့ ရှမ်းဆန်အချိုးပါ.
အားလုံးထညျ့ပွီးရငျ အရသာသမသှားအောငျဇှနျးဖွငျ့မှပေေးပွီးအဖုံးပိတျပွီး ခါတိုငျးထမငျးခကျြသလိုပဲခလုတျနှိပျထားလိုကျရငျရပါပီ.ခလုတျတကျသှားရငျပလပျကျိုခကျြခွငျးမဖွုတျသေးပဲ ၁၅မိနဈခနျ့နှပျထားပေးပါ.
အချိန်စေ့မှ အဖုံးဖွင့်ပြီးထမင်းကိုအပေါ်အောက်ခပ်ဖွဖွမွပေးလိုက်ပါ.ဒါမှထမင်းတွေကအခဲလိုက်ကပ်မနေဘဲဆန်ချောင်းလေးအတိုင်းပွပွလေးဖြစ်နေမှာပါရှင်..အရသာမြည်းကြည့်လိုက်ရင် မွှေးပြီးအင်မတန်စားကောင်းတဲ့မအီတဲ့အုန်းထမင်းလေးဖြစ်နေပီပေါ့ရှင်…
အုန်းထမင်းမွှေးမွှေးလေးရရင် ကြက်သားဆီပြန် သရက်သီးစိမ်းသနပ် သို့မဟုတ် သရက်ချဉ်သုပ်ဘာလာချောင် ကြော် ချဉ်ပေါင်ဟင်းချိုတို့ဖြင့်သုံးဆောင်ပါရှင်။​
Categories ဟင်းချက်နည်းများ Post navigation
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ (84)
တရားနှင့် ဂါထာတော်များ (173)
မိုးလေ၀သ သတင်းများ (30)
အချစ် နှင့် ရသစာပေများ (17)
အချစ်နှင့် ရသစာပေများ (21)
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး (205)
အနုပညာ ရပ်ဝန်း (7)